Puntland iyo Galmudug oo galay heshiis cusub kadib is-faham darro dhawaan soo kala dhex gashay. – Radio Daljir
Seteembar 6, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Sept 06 – Maamullada Puntland iyo Galmudug ayaa wada-galay heshiis cusub oo lagu xoojinayo heshiisyadii horay uga dhexeeyey labada dhinac kaddib markii toddobaadkaan ay ka dhex aloosantay is-faham darro xooggan.
Heshiiska cusub ee labada dhinac ay isla saxiixdeen oo ka kooban dhawr qodob ayaa dhammaantood ku salaysan is-kaashiga iyo xoojinta wada-shaqaynta labada dhinac iyadoo si gaar ahna la iskula meeleeyey adkaynta nabad-galayada.
Shirka lagu gaaray heshiiska cusub oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo madaxda Puntland iyo kuwa Galmudug-ba uga qayb-galeen shirkii wadatashiga ahaa ee Soomaaliya ayaa qodobadka 1-aad ee qalinka lagu duugay waxaa uu ahaa joojinta xurgufta iyo is-xumaansiga iyo si deg-deg ahna loo xakameeyo xabadda colaadeed.
Isla qodobka kale ee muhiimadda leh ayna isla meeldhigeen labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ayaa ahaa xoojinta xiriirka ay wadaagaan maamulladu iyadoo laga tigtoonaanyo waxkasta oo horseedi kara khilaaf iyo khaakhuulid amni , dhaawicina kara is-fahamka dhinacyada.
Madaxda Puntland iyo Galmudug waxaa sidoo kale ay isla meeleeyeen in si joogto ah looga wada-shaqeeyo amniga iyo nabad-galyada, hal dhanna looga soo jeedsado cidkasta oo loo arko in ay caqabad iyo cago-goyn ku yihiin amniga iyo wada-noolaansha.
Waxaana ugu dambayntii la isla meeleeyey, lana garawsaday labada dhinacba in ay leeyihiin hal cadaw oo kaliya, sidaasi darteedna ay lagama maarmaan tahay in dhug loo yeesho dhibaato kasta oo ka dhacda gobolka Mudug in ay saamaynayso qaybaha bulsho ee gobolka oo dhan.
Shirka heshiiskaan cusub iyo is-fahamka buuxa lagu gaaray waxaa waxaa labada maamul ee Puntland iyo Galmudug u kala madatalayey wafuud ka kooban xubno kala duwan, ayna hormuud u ahaayeen labada m/weyne ee Caalim iyo Faroole.
Dhinaca kale shirka heshiiskaasi lagu gaaray waxaa ku sugnaa, kana ahaa goob-joogayaal madaxda sar sare ee dawladda federaalka gaar ahaan R/wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, waxaana sidoo kale isla goobtaasi ku sugnaa danjire Mihinga kuwaasi oo dhammaantood uga hambalyeeyey is-fahamka ay gaareen.
Galitaanka heshiiskaan cusub ayaa yimid kaddib markii muran iyo mad-madaw xooggan uu soo kala dhex-galay labada maamul taasoo ka curatay colaaddii dhawaan Galkacyo ka dhacday oo labada maamul ay eedaymo kala duwan isku jeediyeen, waxaana horay u jiray heshiisyo ay wada-galeen Puntland iyo Galmudug oo aysan badankoodu u hirgalin sidii loo dhigay.